Department mana fayyaa Iowa akka biyyati guututi namni haarawa sababa Covid-19 due 3 yoo ta’u namni | KWIT
Lakkoofsi nama hospitaala jiru Iowa keessati 200 gad xiqqaate jira. Hospitaala Sioux City lamaan keessati dhukubsattooni Covid-19 parsantii 30% gad xiqqaate jira. Guyaa kaleesa nama 15 yoo tau guyyaa har’aamo 11 dha. Qorannoo bulti 14 keessati godhame namni qabame parsanti 6% gad xiqqaate jira.
Iowa Governor Kim Reynold’s gabaasa oduu guyyaa har’aa ejensi tokko simachuuf wayta deemtetti waaye faayida talali corona virus himtee jirti.
Reynolds akka jetteti qorichi 741,000 tau state guutu keessati kennamee jira. Parsantii jiraattota 24% ta’an kan umiriin isaani 18 fi sanii ol ta’an taalali yeroo tokko argatanii jiru. Parsantii 70% kan tau ammo nama umriin isaani 65 fi sanii ol ta’an argatanii jirani.
Ogeessi fayyaa Nebraska akka jedhetti talaali corona virus kan itti aanu kanatti akka state guututi akka nama umriin deeman irrati akka xiyyeefatan himan, kunis baayanin kan jia kana dhuma irrati ta’uudha.
Gov. Pete Ricketts akka jedheti state talaali corona virus kan dhufu kana keessati parsantii 90% isaa akka nama umriin isaani 50 fi 64 ol ta’anii fi sanii olta’an jalqabatti akka kennuu qaban ogeeyyi fayyaati himani jiru. Parsanti 10% kan hafe ammo jiraattota maraafu kan kennamu ta’a.
Rickets akka jedhetti doctorota local public health directors waliin eenu hojachuu akka danda’u kan madaalan ta’a.